Maxaa ku dhacay Messigii Waddanka Denmark ee qaatay dhalashada dalka Turkiga, Emre Mor? – Gool FM
Maxaa ku dhacay Messigii Waddanka Denmark ee qaatay dhalashada dalka Turkiga, Emre Mor?
Haaruun August 27, 2019
(Yurub) 27 Agoosto 2019. Emre Mor waxaa loo arkayay Messiga cusub ee kubadda cagta waxa uu lahaa tayo dabiici ah iyo hannaan ciyaareed mucjiso ah, balse maxaa ku dhacay xirfaddiisii layaabka lahayd ee uu lahaa?.
Dhammaan dadka la socda kubadda cagta ayaa isku raacay in Emre Mor uu yahay laacib ay adag tahay in markale kubadda cagta lagu arko, sabab la xiriirta sida uu u aqiryo kulammada iyo hibadisii cajiibka ahayd oo ugu dambeyn la waayay.
Waxa aynu warbixintaan ku eegi doonnaa Sababta ka dambeysay in wiilka ka soo jeeda waddanka Denmark ee Emre Mor uu ula mid noqon waayay Lionel Messi iyo sida ay dabeecaddiisu u ahayd mid laga cabsado, waxaana warbixintaan soo jeedinaysa Sagal Daahir Qaasim ee halkaan hoose ka daawo.
Kooxda Dekedda oo dalka dib ugu soo laabtay xilli laga soo dhaliyey 13 gool
Nemanja Matic oo Mustaqbalkiisa kala hadlaya kooxdiisa Manchester United kaddib markii keydka la dhigay kulamadii dhowaa